Udubule ingoduso wazidubula naye | News24
Udubule ingoduso wazidubula naye
IMINDENI emibili ebekumele ilungiselele umshado igcine isilungiselela imingcwabo emibili emva kokuba lowo obezoba umkhwenyana edubule wabulala ingoduso yakhe waqede wazidubula naye.
Lesi sigameko esishiye abantu abaningi bebambe ongezansi senzeke ngeSonto ekuseni endaweni yaseMaswazini.
UNks Londi Bhengu wase-Taylors eDepho yamabhasi udutshulwe wabulawa yilowo obezoba umkhwenyana wakhe uMnuz Nxele wabe esebhekisa isibhamu kuyena wazidubula bashonela khona lapho bobabili.
UNks Bhengu noMnuz Nxele bebematasa belungiselela umshado wabo njengoba besekwenziwe wonke amalungiselelo sekusele ukuba kuqokwe usuku lomshado.
Ngokuthola kwe-Echo ngelinye ilungu lo mndeni elizichaze njengomamncane kaNks Bhengu uthe nabo bengumndeni abakabi nalo ulwazi olugcwele lokuthi kungabe yini egcine eholele ekutheni kugcine sekwenzeke lesi sigameko.
Uthe: “Into esiyaziyo wukuthi uLondi ubehambile eye KwaMafunze emcimbini njengoba kade engumuntu osina ingoma.
“Kuthiwa ufonelwe umyeni wakhe emtshela ukuthi abahlangane kaZinqamu amulethele ubuhlalu bakhe. Ngemuva kwalokho asazi ukuthi kwenzekeni baxoxe bathini ngoba bagcine ngokuhamba beya kubokamkhwenyana eMaswazini nokuyilapho bephelele khona. Nathi sisadidekile asinalo ulwazi lokuthi kungabe yini eholele ekutheni kuze kwenzeke lokhu okwenzekile,” kuchaza yena.
Omakhelwane baNks Bhengu nabo bathi basashaqekile ngalesi sigameko.
Omunye umakhelwane okhulume ne-Echo ongathanda ukudalulwa igama uthe babuhlungu kakhulu ngento eyehlele uNks Bhengu nomndeni wakhe.
“Laba bantwana bebengeve bethandana into yabo ibiza kahle konke kuhamba kahle namanje sisadidekile ukuthi kungabe konakelephi, yini lena ebingaze iholele ekutheni kuze kwenzeke lesi sigameko?.
“Laba bantu bese bezoshada sekuqaliwe nokuthengwa izimpahla ezilungiselela umshado.
“ULondi ubaziwa nje ukuthi uyingane ezilungele engumuntu ophansi futhi ehlonipha. Sibuhlungu sonke kakhulu nje ngalento eyenzekile.
“Umndeni wakhe bekumele engabe uyaqhubeka ulungiselela umshado kodwa manje sekumele ulungiselele umngcwabo wakhe,” kubeka umkhelwane obebukeka ekhathazekile nasebusweni.
Uqhube wathi okubuhlungu kakhulu ngisho bekungathiwa uNks bhengu kukhona into emuphethe kabi ubengeke aze ayikhulume kwazise ubehleli ezithulela.
Umndeni kaMnuz Nxele wona awuthandanga ukuphawula ngalesi sigameko.
Okhulumela amaphoyisa eMgungundlovu uSergeant Mthokozisi Ngobese usiqinisekisile isigameko wathi amaphoyisa avule icala lokubulala likaNks Bhengu base bevula nedokodo ngokushona kukaMnuz Nxele.